Isi na peeji nke: ARDC akwụkwọ — HunterThinks.com
Nke a bụ ihe index nke akwụkwọ ma ọ bụ si ARDC. Ha mere ndokwa na n'usoro ha si mee. Fọrọ nke nta niile nke akwụkwọ bụ na PDF, na ụfọdụ n'ime ha nwere ihe karịrị 1,000 peeji nke; njikọ n'okpuru njikọ mbụ page naanị.
Ụfọdụ akwụkwọ na-na-efu a index, tinyere akwụkwọ na:
M nwere oge biputere,
ịda mbà n'obi m, nchegbu, ma ọ bụ PTSD mgbaàmà gbochiworo nhazi akwụkwọ,
M kwagara ọhụrụ a ngalaba,
M na-adịghị a oyiri nke,
Amaghị m dịrị, na
m ileghara anya.
My mgbaru ọsọ bụ post niile akwụkwọ, ma ma ọ bụ akwụkwọ na-ebu isi ka m.
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 21
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 20
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 19
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 18
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 17
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 16
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 15
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 14
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 13
Ụlọikpe Kasị Elu Arịrịọ maka Extension nke Time page 12
Page1 Page2 … Page371 Osote →